Puntland oo amaro cad iyo ganaax kusoo rogtay ciddii qaadan-wayda lacagta Shanta boqol ee Shilin Soomaaliga ah. – Radio Daljir
Puntland oo amaro cad iyo ganaax kusoo rogtay ciddii qaadan-wayda lacagta Shanta boqol ee Shilin Soomaaliga ah.
Maajo 7, 2013 3:14 b 0
Garowe, May, 07, 2013 ? Dawladda Puntland ayaa markii ugu horaysay waxaa ay si cad amaro ugu soo rogtay ganacsatada, kaasi oo ku aadan in laganaaxayo, ciddii qaadan-wayda lacagta Shanta boqol ee Shilin Soomaaliga ah. Tilaabadaan ayaana ka dambaysay kaddib markii maal-mihii lasoo dhaafay ay jirtay hadal-hayn xooggan oo ku saabsan dawladdu inay joojisay lacagta shanta boqol ee Shilin Soomaaliga ah.
W/kuxiggeenka maaliyada Puntland Cabdi Ibraahim Warsame (Cabdi-qawdhan) oo maantay shir-jaraa?id ku qabtay xafiiskiisa Garowe ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay, waxaana uu hadalkiisa raaciyay inay jiraan dad badan oo dacaayado been abuur ah had iyo goor ka sameeya dawladda Puntland.
Md. Qawdhan ayaa mar uu ka hadlayay sababaha keenay in dawladdu soo rogto amaro ku saabsan in canshuurta lagu qaado lacagta doolarka Maraykanka ayuu ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku guul-daraysatay inay soo daabacdo lacag Shilin-Soomaali ah, xilligaana ay gabi ahaanba sii dabar-go?aysao lacagtii shilin Soomaali ahayd.
“Waxaa jirtay todobaadkii hore in dowladda Puntland ay ku dhawaaqday in miisaaniyadda dowladda ee Shilin Soomaaliga ku dhisnayd in doollar lagu saleeyey, arrintaas waxay ku timid muddo badan ayaa waxaa laga wada hadlayey sidii lacag Shilin Soomaali ah dalka loo keeni lahaa,? kaddib markii lacagtii Soomaaligu 23-sano ka dib ay dalka ku yaraatay masuuliyadaas waxaa lahayd dowladda Federaalka. December 2011 ayaa Puntland hishiis la gashay DFKS ee xilligaas, ?waana hirgeli wayday inay lacag soo daabacdo mar-labaad waxay la gashay Puntland hishiis kale wasiirka maaliyadda Soomaaliya xilligii safarkii R/wasaare Saacid, sida muuqatana hishiiskaasina waa hirgali-waayay? Sidaasina waxaa yiri W/kuxiggeenka? maaliyada Puntland Md. Cabdi Qawdhan.
Hadalkaan kasoo yeeray W/kuxiggeenka maaliyadda Puntland mudane Cabdi Qawdhan ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay socotay hadal-hayn xooggan oo ku aadan in lacagta Shanta Boqol ee Shilin Soomaaliga laga joojiyay deegaannada Puntland, inkastoo arrintaasi ay Puntland si cad u beenisay.
Hay?ada udooda xaquuqul aadanaha ee (HRW) oo fariin qaylo-dhaan ah u dirtay deeq-bixiyaasha lagu casumay shirka London.